कहिले खुल्छन् विद्यालय ? यसो भन्छन् सरोकारवाला - Shikhar Post Shikhar Post
म विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने विषयमा जबरजस्ती हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु । शिक्षक डराएका छन्, विद्यार्थी डराएका छन्, अभिभावक डराएका छन् भने खोल्नु हुँदैन । किनकी डराएको विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई भोलि केही भइहाल्यो भने को जिम्मेवार हुने ? डराएको अभिभावकका बालबच्चाको जिम्मेवारी कसले लिने ? यदि विद्यार्थी, अभिाभावक र शिक्षक कोही पनि डराएको छैन भने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डहरु पालना गरेर पढाउँदा हुन्छ । तर विद्यालय खोल्दा सबै सिक्छन् भन्ने जसरी जबरजस्ती विद्यालय खोल्ने चाँहि गर्नुहुँदैन ।
प्रकाशित मिति : आईतवार, २७ असार २०७८ ११:४१